Isku-beddelashada faylasha AutoCAD 2009 ee Microstation V8 - Geofumadas
Sebtember, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Dhibaato ayaan ka helaa farsamo yaqaan Microstation V8, oo eegaya faylka AutoCAD 2008.
Habka dwgal waxaa hore loo isticmaalay Interact CAD, oo ay diyaarisay Mike Riddle ee sanadaha 70, tani waxay ka mid ahayd co-founders of AutoDesk in bilaabay magaca isku midka ah ee faylasha autoCAD laga bilaabo sanad-sanadki 1982.
Sawirka wuxuu muujinayaa this version Jacka xidhiidhka CAD, arka in horay mouse, iyadoo kuwa looxyadana wax baa loo isticmaalaa in lagu digitize iyo talinayaa in la isticmaalo laba kormeerayaasha halka warqado cagaaran mar walba idinka dhigay inay xidhaan muraayadaha bilihii 3 dameer Daboolka dhalada.
Laga soo bilaabo 82 ilaa sanadka 2007 AutoDesk wuxuu abuuray noocyo kala duwan, waxaa loo tixgeliyaa ugu yaraan 18 kala duwanaansho 25 sano oo taariikh ah. Waxaa ka mid ah kuwa ugu dambeeyay 2007, 2004, 2002, 2000 iyo R14 waxayna sameeyaan si looga fogaado injineernimada lakiin waxaa lagu dhaleeceeyay la'aanta wada shaqeyn la'aan.
La Alliance Design Alliance, iyadoo fikradda ah ee IntelliCAD ay bilaabeen inay sii daayaan codsiyada 1998 ee isticmaalay nooca dwg si ay AutoDesk u beenisay codsi ah in ay isticmaasho xeeladaha istiraatiijiga ah ee 2006 sannadka.
Telenovela weli ma aysan dhicin, Microstation waxay bilowday inay akhriso oo ay wax ku qoraan qaabka dwg ee ka soo baxa version 8, sannadka 2004. 2007 version waxaa kaliya oo la akhrin karaa Microstation 8.9 loo yaqaan XM, had iyo jeer iyada oo aan loo baahneyn in loo badalo dgn.
Seddex siyaabood oo loo sameeyo
Sidaa darteed ka jawaabista su'aasha, waxaa jira laba siyaabood oo loo akhrisan karo faylka dwg ee Microstation V8.
Midka ugu horreeya wuxuu furan yahay AutoCAD 2008, ka dibna "faylka / dhoofka / dhoofinta / dhoofinta / shidaalka / shidaalka / sheyga" ee autoCAD / 2004 ", qaabkaas waxaa lagu akhrin doonaa Microstation V8
Habka labaad waa in la furo AutoCAD 2009, ka dibna sameynta "file / export / dgn V8"
Midka saddexaad wuxuu furan yahay Microstation XM, kaas oo aad ka soo dejisan karto halkaas, waxana uu kaaga shaqeynayaa kulamada 15. Noocani wuxuu akhriyaa qaabka dwg 2008 iyada oo aan loo baahneyn inuu u beddelo dgn. Markaas waxaad u dhigi kartaa sida dgn, "faylka / badbaadin sida / dgn V8"
Waa maxay mustaqbalka
Ka dib markii la saxiixay heshiiska dhexeeya AutoDesk iyo Bentley, ka version xiga ee AutoCAD iyo Microstation 2010 Athens ayaa la filayaa in labada barnaamijyada isticmaali format caadiga ah waxa la filayaa in aan ku badbaadin karto wax badan oo malaayiin ay kukacayaan interoperability oo ka mid ah labada shirkadood.
Hadda farsamada, waxay ku kacaysaa wakhtiga gaadiidka 1 si aad u raadiso goobaha internetka, daqiiqado 22 ah oo isku xiran oo aad u gaabis ah oo iigu soo diraya faylka iyo daqiiqadaha 4 subaxnimadayda.
Ah ... maaha kharashka malaayiinka, laakiin wali ma qiyaaso wakhtiga ay qaadato si aad ugu noqoto goobta sahanka, haddii duufaantu ay ku dhexjirto aagga waxay u ogolaataa calaamadaha duufaannada.
Post Previous«Previous Maxay iigu soo booqdaan?
Post Next Shaqooyinka Fursadaha ee Khabiirada GISNext »
6 Jawaab ah "Isku-rogidda faylasha AutoCAD 2009 si Microstation V8"
Ma aqaano waxaad ula jeedo si toos ah. Haddii aad ka hadasho ku sameynta bulk (badan oo bulk ah), ugu fiican waa isla Microstation.
Noocka tijaabada ah ayaa kuu ogolaanaya inaad taas sameysid, adoo isticmaalaya qalabka wax lagu kala qeybiyo, go'aamiyo faylalka, qaabka aad u diri doonto, iyo samaynta isbedel weyn.
Waxaan fahansanahay in dhoofintu ay sameyso dwg 2007, markaa wax dhibaato ah ma jiri doonto.
Alberto Jimenez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raadineynaa barnaamij kaas oo ka soo baxaya sawirrada Microstation V8 si toos ah Autocad 2008.
Halkeen ka heli karaa?
Ka jawaabidda su'aasha soo socota ee boostada
Waa maxay noocyada AutoCAD ee Microstation u furan?
Microstation V8.5 waxay taageertaa faylasha dwg / dwf hore iyo ilaa AutoCAD 2004, tan iyo markii uu jiray taariikhdaas.
Microstation V8.9 XM waxay taageertaa dwg / dxf ilaa AutoCAD 2007
Microstation V8i Xulo 1 Taageerada dwg / dxf laga bilaabo AutoCAD 2010 ilaa AutoCAD 2012
Maya, waxa kaliya ee loo dhoofiyaa qaybaha DWG ee hore.
Laakiin waxaa aad loogu talinayaa, waxay ku haysaa jawiga autocad 2009 (ribbon), waxayna u ogolaataa in la qiyaaso masaafooyinka, goobaha, qalabka dib u dhoofinta iyo isdhexgalka, daabacaan miisaan, aragti kala duwan ee muuqaalka ... .etc
Dabcan waa qalab fiican oo loogu talagalay kuwa u baahan in la eego faylasha DWG marmar, iyo sababtoo ah waa bilaash, waxay ka hortageysaa inaad isticmaasho qaybaha sharci-darrada ah ee AutoCAD
Waad ku mahadsan tihiin, mararka qaarkood waxay ka fiican tahay inaad tiriso lugaha lo'da oo u kala qaybso afar.
Hal su'aal, u beddel qaabka kale sida dgn?
haddii kale waa in loo rogaa dwg 2004 munaasabadda layligeena, maaddaama qofka akhrinaya uu yahay isticmaale Microstation V8
Muhiim maahan in la fidiyo "Autocad 2008 ama 2009" oo lagu keydiyo noocyadii hore, sidoo kale looma baahna in la baaro noocyada microstation xm "halkaa" ... 🙄
Kaliya si bilaash ah uga soo degso degelka shabakadda 'Autodesk', DWG TrueView, oo ay ku jiraan DWG TrueConvert.